Nametraka Fanampenam-bava Amin’ny Haino Aman-jery Ny Manampahefana Jordaniana Taorian’ny Famonoana Ilay Mpanoratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2016 9:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Sivana. Sary avy amin'i Eric Drooker. CC BY 2.0
Maty voatifitra tamin'ny 25 Septambra teo ivelan'ny fitsarana iray ao an-drenivohitra Amman, izay saika nanaovana ny fotoam-pitsarana azy noho ny sariitatra nozarainy tao amin'ny Facebook ilay Jordaniana mpanoratra Nahed Hattar.
Noraràn'ny manampahefan'ny governemanta tamin'ny fomba ofisialy ny fandrakofam-baovao mikasika ny famonoana azy.
Nampiseho lehilahy be volom-bava any an-danitra, matsilailay eo ambony fandriana miaraka amin'ny vehivavy roa, ao anaty trano-lay ny sariitatra voalaza. Mijery ao anatin'ny trano lay Andriamanitra, ary mangataka amin'Andriamanitra ilay lehilahy mba hitondra divay sy voanjo ho azy. Namoaka ny sariitatra miaraka amin'ny fanehoan-kevitra hoe “ny Tompon'ny Dawa'ish” ny mpanoratra. Ny Dawa'ish dia fanafohezan-teny amin'ny teny Arabo ampiasaina hilazana ireo mpikambana na mpanohana ny ISIS milaza fahamaroan'isa. Matetika ampiasaina hilazana ratsy momba ny vondrona na ny mpikambana ao aminy ny Dawa'ish sy Dai'sh (fanafohezan-teny amin'ny teny Arabo amin'ny ISIS).
Niatrika telo taona an-tranomaizina i Hattar noho ny fanevatevana ny fivavahana.
Noho ny baikon'ny Praiminisitra Hani Al-Mulqi, nosamborina tamin'ny 13 Aogositra i Hattar noho ny “faniratsiràna an'Andriamanitra. Araka ny tatitry ny Al Jazeera, nesoriny ilay sariitatra taty aoriana, izay nolazainy fa “maneso ny mpampihorohoro sy ny foto-kevitr'izy ireo momba an'Andriamanitra sy ny any an-danitra ny sariitatra. Tsy misy fitsabahana amin'ny fahamasinan'Andriamanitra mihitsy izany. “
Mafana fo avy ao amin'ny elatra ankavia i Hattar, fantatra amin'ny asa sorany ara-politika mampiadihevitra sy ny fanohanany ny governemanta Syriana eo ambanin'ny fitondran'i Bashar al-Assad. Notazonin'ny polisy ity mpanoratra 54 taona ity mandrapaha votsotra azy tamin'ny fandoavana onitra tamin'ny fiandohan'ny volana Septambra. Na dia eo aza ny fandrahonana ny ainy, tsy mba nahazo fiarovana avy amin'ny polisy mihitsy izy.
Taorian'ny vaovaon'ny fahafatesany nivoaka tamin'ny 25 Septambra, efa nanampo baiko fanampenam-bava ny Jordaniana:
Tsy mamaha ny olana ny dingana narahana, nanampim-bava azy
Namoaka baiko fanampenam-bava ny haino aman-jery ny governemanta fotoany fohy taorian'ny famonoana an'i Nahed Hattar. Satria olana ny fanakatonana ny haino aman-jery
Ahoana no ahafahantsika miady amin'ny mahery fihetsika raha tsy afaka miresaka momba izany akory?
Eny tokoa, namoaka fandraràna fandrakofam-baovao mifandraika amin'ny famonoana an'i Hattar ny Fitsarana Fiarovam-panjakana ao amin'ny firenena tamin'ny 26 Septambra. Araka ny fanambarana navoakan'ny vaomieran'ny haino aman-jery, sampan'ny governemanta mifehy ny haino aman-jery, pirinty, sy ny media elekitirônika, ny kinendrin'ny fandrarana dia ny “hiaro ny tsiambaratelon'ny famotorana sy hiantohana ny tombontsoam-bahoaka”.
Tsy zava-baovao ho an'i Jordania izany. Tamin'ny 1 Septambra 2016, namoaka fanampenam-bava amin'ny fandrakofam-baovao mifandraika amin'ny Mpanjaka sy ny fianakavian'ny mpanjaka ny governemanta, raha tsy hoe ny Fitsarana ny Mpanjaka Hashemita mihitsy no mamoaka azy. Nilatsaka ho endrika fanambarana teny miisa 25 avy amin'ny mpanara-maso ny haino aman-jery ao Jordania ny fandraràna ary tsy nanome antsipirihany mikasika ny faharetan'ny fandraràna na izay sazy mety ho azon'ireo tsy manaraka ny baiko izany.
Tao amin'ny Twitter, nalahelo ny Jordaniana fa toa avoaka ankehitriny ny baiko fanampenam-bava rehefa misy zavatra mahaliana mitranga.
@tarawnah 1. Misy zavatra mahaliana miseho 2. Mivondròna fa iray isika 3. Mitohy ny baiko fanampenam-bava
Nitanisa baiko fanampenam-bava miisa 15 tamin'ny fiandohan'ny taona 2014 ka hatramin'ny tapaky ny volana Aogositra ny gazetiboky an-tserasera iray ao an-toerana 7iber. Ahitana baiko fanampenam-bava navoaka tamin'ny raharaha fanenjehan'ny manampahefana Jordaniana an'i Hattar, andro taorian'ny nisamborana azy ny lisitra.
Tamin'ny ohatra iray hafa, nandràra ny fandrakofana momba ny fanagadrana mpitory teny noho ny fandefasana lahatsary mitsikera ny fandraisana anjaran'i Amman tamin'ny hetsika ara-miaramila notarihan'ny Etazonia ho fanoherana ny ISIS ny manam-pahefana tamin'ny 28 Aogositra 2016.
Na dia mailaka aza ny governemanta Jordaniana manameloka ny famonoana azy, mamaritra izany ho toy ny “heloka bevava ratsy indrindra”, nilaza ireo mpitsikera fa tompon'andraikitra amin'ny ampahany ihany koa izy noho ny fametrahana fanenjehana ny mpanoratra aloha voalohany , sy noho ny tsy fanadihadiana ny fandrahonana ny ainy.
Mpanoratra sady tonian-dahatsorara Jordaniana Naseem Tarawnah nisioka hoe:
Lazao izay fantatrao momba an'i Hattar, fa fampatsiahivana ny tena toetry ny fahalalahana miteny, maneho hevitra ary ny fahalalahan'ny haino aman-jery ao Jordania ny famonoana azy.
Tamin'ny matoandahatsoratra fisaonana momba ny fahalasan'i Hattar izay navoaka omaly, nanoratra ny 7iber hoe:
Raha mandoto ny tanan'ny mpamono an'i Hattar izay nitifitra azy in'efatra ny rà, tsy madio ihany koa ny tanan'ny fanjakana sy ny mpanao famotorana … Nanomboka tao amin'ny media sosialy sy sehatra hafa ny fitarihana hamelezana ilay mpanoratra nisy namono ho faty, izay namoaka sy nandefa fandrahonana hamono ho faty tany aminy. Tsy nisy ny “baiko hanadihady” momba izany na hanomboka famotorana ara-pitsarana atao amin'ireo mpandrahona … Raha tsy hoe ity governemanta ity ihany no nanomboka ny raharaham-pitsarana an'i Hattar, afaka mamaritra ny andraikiny ho tsy miraharaha na be sehoseho fotsiny isika. Saingy raha sokajiana fa zava-dehibe kokoa noho ny fiarovana ny ain'ny iray amin'ireo ololm-pireneny ny lazany sy ny faneken'ny sasany azy, manjary zava-dehibe kokoa noho izany ny andraikiny mikasika ity heloka bevava ity.
Namaritra ny famonoana ilay mpanoratra ho “vokatry ny tsy fahampian'ny fahavononan'ny manampahefana Jordaniana hanalalaka ny fanehoan-kevitra” ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety ary niantso ny governemanta mba “hitondra ny mpamono olona eny amin'ny fitsarana sy hanova ny politikany amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety mba hampiroborobo ny fisokafana sy ny fiarovana ny feo mitsikera. “
Milaza ny fanampenam-bava ankehitriny fa tsy mikasa hanalalaka ny fahalalahana miteny na ny politikan'ny sivana mihitsy ny governemanta Jordaniana atsy ho atsy.